China iphepha elingenanto, iphepha elenziwe ngumenzi kunye noMthengisi | Sihai
Iphepha elihonjisiweyo (i-Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) yiphepha elineewindows elikhutshiweyo elineendonga ezimbini ezicaba ezixutywe ziimbambo ezime nkqo. Kk, iphepha elize lithe laziwa njengephepha lephepha, iphepha lebhodi elincinci, iphepha lebhodi elingenanto, iphepha lephepha, iphepha lebhodi, iphepha le-correx kunye nephepha le-coroplast. Iphepha elingenanto elingenanto lenziwa ikakhulu ngenxa yempembelelo ephezulu ye-polypropylene (PP), enokuphinda isetyenziselwe ukuphinda isetyenziswe, enokuhlambeka, yomelele kwaye iphinde isetyenziswe njlnjl. , intengiso, ulwakhiwo, ezolimo, amashishini, amayeza, njl.
Sinako elicwangcisiweyo wenza ukutyeba ukusuka 2mm -12mm, ngesiqhelo, 2-5mm zamafu zingundoqo zisetyenziselwa iimveliso ukupakisha, kunye 4-6mm zamafu zisetyenziswa zentengiso, ngokutsho isicelo ezahlukeneyo, i-GSM ungenziwa ngemfuneko, phezulu I-GSM ibhodi eyomeleleyo. Iphepha elingenanto elingenanto yinto entsha enokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zamashishini, yinto eguquguqukayo enokuthi yenziwe ngokwezifiso nangayiphi na imilo, nabuphi na ubungakanani. Iphepha elingena mngxunya ngokungqinelana nesicelo esahlukileyo, linokwenziwa ibhodi yedangatye ekhawulezileyo, i-ESD iphepha elithambileyo, kunye ne-UV ikhusele iphepha elingenanto, inokwenza unyango lwe-corona lushicilelo lusebenzisa.
2-12mm iphepha ezibuhlazarha, iphepha iinkcukacha incence
Ukutyeba 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9-10mm 11mm 12mm
I-GSM (g / m2) Ama-350 ± 30 Ngama-500 ± 30 700 ± 30 Ngama-800 ± 30 1000 ± 30 1250 ± 30 1450 ± 30 1600 ± 30 Ngo-1850 ± 30 2000 ± 30
Umbala kunye nobukhulu Umbala esingabizi, ubukhulu elicwangcisiweyo (ububanzi ububanzi 2300mm, ubude nayiphi ubukhulu)
Khetha 1.Ilangatye nekudodobalisa
PP eziluncedo sheet sheet:
1) Ubunzima bokuKhanya, ngokuqinileyo
2) Ingenabungozi, ingekho incasa, Ungcoliseko-ngaphandle
3) okungangenwa ngamanzi, ukunganyangeki kokufuma
4) Umothuko ukumelana, Ukwaluphala ukumelana, nokumelana, ukumelana nobushushu
5) Ukurisayikilisha \_ okusingqongileyo-kulunge
I-6) Umbala obuninzi, ubungakanani obulungelelanisiweyo, obusebenzayo usebenzisa
Iphepha leholo elinemingxunya linobunzima bokukhanya, bomelele, ubungqingqwa obufanayo, umphezulu ogudileyo, ukumelana nobushushu obuhle, amandla oomatshini aphezulu, uzinzo lweekhemikhali oluhle kakhulu kunye nokugquma ngombane, iimpawu ezingezizo ityhefu. Kungaba ngokufaka isicelo esahlukileyo ukongeza izinto ze-ESD ezenziwe nge-ESD iphepha elingenanto, yongeza izinto ze-UV ezenza i-UV ikhusele iphepha elinamakhasi njalo njalo. Ke yinto ebhetyebhetye enokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zamashishini.
PP sheet incence
1.Imveliso yokupakisha imveliso: imveliso yokupakisha ibhokisi, ibhokisi yokugcina, ibhokisi yokugcina, ibhokisi yokugcina, ibhokisi yokuhambisa, ibhokisi yokupakisha, ibhokisi ye-ESD, ibhokisi yokupakisha ye-ESD, ibhokisi yokupakisha izinto zekhompyuter, ibhokisi yebhokisi yengeniso, ibhokisi yokwahlula ibhokisi, i-ESD ibhodi engenanto ibhokisi yengeniso, ibhokisi ebhodini ingeniso ibhokisi yengeniso.
2. Ityala kunye nengxowa yebhodi exhasa: ityala kunye nebhodi yokufakelwa kwebhegi, imeko kunye nebhodi yokuxhasa ibhegi, ibhodi yokwahlula.
3.Ibhotile, ishishini elijikelezayo lesilikhi: iphedi yebhotile yeglasi, iphedi yebhotile yebhiya, iinkonkxa zeemveliso zepali, isilika ejikeleza isilili, ukwahlula kweebhotile, umaleko wepallet, iipallet zokupakisha iphedi
4. Umzi mveliso: Oomatshini bokugcina umatshini wokubopha, iinxalenye zeplastiki zomatshini, isahluli somatshini.
5. Umzi-mveliso wentengiso: Ibhokisi yokubonisa yebhodi engenanto, ibhokisi yokubonisa, ibhodi yentengiso, ibhodi ye-corona, uphawu lwe-coroplast, ibhodi yemiqondiso, ibhokisi yokubonisa, iimpawu zephepha, iphepha lebhodi yentengiso
6. Umhombiso wasekhaya: ibhodi yesilingi, iphepha le-grille, ulwahlulo lwendlu yangasese, ibhokisi yokugcina, isitya sokugcina iimpahla
7. kushishino ifanitshala: itafile iti kwibhodi mat, ibhodi ifanitshala uhombiso.
8. Ezolimo: zonke iintlobo zebhokisi yeziqhamo, iibhokisi zemifuno, iibhokisi zetyhefu, iibhokisi zokutya, iibhokisi zeziselo;
9. Izinto zokubhala kunye nemveliso yezemidlalo: ibhodi emnyama, ibhegi yefayile, ibhokisi yeefayile.
Umzi mveliso weemoto: iphedi yevili lokuqhuba, ipleyiti yemisila yemoto, iphedi yomaleko, isahluli sezahlulo semoto, ibhokisi yemoto ezenzekelayo, ibhokisi yokugcina izinto ezizenzekelayo
11. imboni yombane: i-backboard yefriji, umatshini wokuhlamba umva, ukwahlula ifriji.
12. Iimveliso zabantwana: iinxalenye zeenqwelo, i-buggy backboard, i-buggy cushion, umqobo okrelekrele wabantwana.
Iphepha leholo elinemingxunya lisetyenziswa ngokubanzi, ifildi yesicelo ekungeneni rhoqo, iphuhlisiwe kuphela yinxalenye yayo, zininzi iindawo ekufuneka ziphuhlisiwe.
Kwibhodi yeplastiki yesikhewu yesicelo sebhodi:
1. Ibhodi yentengiso;
2. Iibhokisi zokurisayikilisha, kubandakanya iibhokisi zokurisayikilisha, iibhokisi zengeniso, iibhokisi zemifuno neziqhamo, iibhokisi zokugcina iimpahla, kunye neebhokisi zezinto zokubhala zeshishini ezahlukeneyo;
3. Iibhodi zemizi-mveliso, kubandakanya ucingo kunye nentambo yokukhuselwa kokupakisha kwangaphandle, iglasi, ipleyiti yesinyithi, izinto ezahlukeneyo zokhuselo lokupakisha lwangaphandle, iipads, iiracks, izahlulelo, iipleyiti ezisezantsi, amakhadi egumbi, njl .;
4. Ibhodi yokukhusela, ixesha lokusebenzisa amakhadibhodi kunye neplywood ezintathu ukukhusela izinto zokwakha ekwakhiweni ziphelile. Ngenkqubela phambili yamaxesha kunye nokuphuculwa kwencasa, qinisekisa ukuba uyilo lokuhombisa lugqityiwe ngaphambi kokuba kugqitywe ukwakhiwa kwaye kufuneka kukhuselwe ngokufanelekileyo ukugcina uqoqosho lusebenza, ukhuseleko kunye nokwenza lula, kunye nokukhuselwa kokwakha iilifti kunye nemigangatho ngaphambi kokwamkelwa .
Egqithileyo pp incindi yenxalenye
Okulandelayo: pp ibhokisi engenayo enencasa